Bit By Bit - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating - 5.4.1 eBird
eBird birders ထံမှငှကျတို့အပေါ်ဒေတာစုဆောင်း; စေတနာ့ဝန်ထမ်းမျှသုတေသနအဖွဲ့ကကိုက်ညီနိုင်မယ့်အတိုင်းအတာပေးနိုင်ပါသည်။
Birds ဂိမ်းနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ornithologists တိုင်းငှက်တိုင်းယခုအချိန်တွင်သည်အဘယ်မှာရှိကိုသိရန်လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစုံလင်သော Datasets ပေး ornithologists သူတို့၏လယ်ပြင်၌များစွာသောအခြေခံမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ၏သင်တန်းအဲဒီဒေတာစုဆောင်းမည်သည့်အထူးသုတေသီများ၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ornithologists ချမ်းသာနှင့်ပိုပြီးပြည့်စုံ data ကိုအလိုရှိကြသည်တွင်သောတစ်ချိန်တည်း, "birders" -people မှာပျော်စရာ-နေကြသည်အဆက်မပြတ်သောငှက်များကစူးစမ်းလေ့လာသူတို့မြင်သောအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ဘို့စောင့်ကြည့်ငှက်သှားတဲ့သူ။ ဤရွေ့ကားလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းများရှိသော်လည်း, ယခုဤအပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အားဖြင့်အသွင်ပြောင်းပြီ။ eBird ကမ္ဘာတဝှမ်း birders မှသတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခင်းတစ်ခုဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းစီမံကိန်းကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ပြီးသား 250,000 သင်တန်းသားများအနေဖြင့်သန်း 260 ကျော်ငှက်တွေ့နေရလက်ခံရရှိခဲ့သည် (Kelling, Fink, et al. 2015) ။
eBird ၏ပစ်လွှတ်မတိုင်မီက birders အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒေတာအများစုသုတေသီများမှကိုမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်:
"ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိခနျးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခုနှစ်တွင်ယနေ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့မှတ်စုစာအုပ်, အညွှန်းကိန်းကတ်များမှတ်ချက်တွေစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ဒိုင်ယာရီနှင့်အိပ်ကြ၏။ Birds အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အဖိုးတန်ကိုသိ [လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] ကောင်းစွာ 'ငါ့နှောင်းပိုင်းတွင်-ဘထွေးရဲ့ငှက်မှတ်တမ်းများ' 'အကြောင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါကြားနာ၏စိတ်ပျက်ကိုငါသိ၏။ ဝမ်းနည်းစရာ, ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမသုံးလို့ရပါတယ်ငါသိ၏။ " (Fitzpatrick et al. 2002)
အဲဒီအစားဤအတန်ဖိုးရှိသော data တွေကိုအသုံးမပြုထိုင်ရှိခြင်းထက် eBird ဗဟို, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာဘေ့စဖို့သူတို့ကို upload လုပ်ဖို့ birders နိုင်ပါတယ်။ သူကား, အဘယ်မှာရှိသောအခါအဘယ်မျိုးစိတ်မည်မျှနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု: eBird မှအပ်လုဒ်လုပ်ထားသည့်ဒေတာခြောက်လ key ကိုလယ်ကွင်းဆံ့။ Non-Bird စာဖတ်သူများအဘို့, "ကြိုးစားအားထုတ်မှု" လေ့လာတွေ့ရှိချက်အောင်နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသောနည်းလမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒေတာများရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများကိုဒေတာအပ်လုဒ်တင်မီကပင်စတင်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအစီရင်ခံစာများ-ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ရှားပါးမျိုးစိတ်များ၏အစီရင်ခံစာများ, အလွန်မြင့်မားအရေအတွက်, ဒါမှမဟုတ် Out-of-ရာသီအစီရင်ခံစာများ-နေကြသည်အလံနှင့် website ကိုအလိုအလြောကျထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုအဖြစ်တင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေ Birders ။ ဒီအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပြီးနောက်, အလံအစီရင်ခံစာများနောက်ထပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဒေသဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရာပေါင်းများစွာ၏တဦးတည်းထံသို့စေလွှတ်နေကြသည်။ ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်သူ-အပါအဝင် birder-The အလံအစီရင်ခံစာများဖြစ်စေစိတ်မချရပါသို့မဟုတ် eBird ဒေတာဘေ့စသို့ ဝင်. အဖြစ်စွန့်ပစ်နေကြသည်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအပိုဆောင်းစာပေးစာယူနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် (Kelling et al. 2012) ။ ပြလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဒီဒေတာဘေ့စပြီးတော့အခုထိ, 100 နီးပါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်မြေားကိုအသုံးပြုပြီ, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သူမဆိုရရှိနိုင် လုပ်. , နေသည် (Bonney et al. 2014) ။ eBird ရှင်းလင်းစွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း birders အစစ်အမှန် ornithology သုတေသနများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြောင်းဒေတာစုဆောင်းရန်တတ်နိုင်ကြသည်ကြောင်းပြသထားတယ်။
eBird ၏အလှအပတစ်ခုမှာကြောင့်ပြီးသားဖြစ်ပျက်-In ကြောင်းဤကိစ္စတွင်, ငှက်များ "အလုပ်" ဖမ်းယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီ feature ဟာကြီးမားတဲ့စကေးအောင်မြင်ရန်စီမံကိန်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် birders ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုသည် "အလုပ်" အတိအကျ ornithologists ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်ဒေတာများမကိုက်ညီပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, eBird အတွက်, ဒေတာစုဆောင်းခြင်း birders ၏တည်နေရာမဟုတ်ဘဲငှက်၏တည်နေရာအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီဥပမာအဘို့, အရှိဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်လမ်းများနှင့်နီးစပ်သောဖြစ်ပေါ်လေ့, ဆိုလိုသည် (Kelling et al. 2012; Kelling, Fink, et al. 2015) ။ အာကာသကျော်အားထုတ်မှု၏ဤမညီမျှမှုဖြန့်ဖြူးဖို့အပြင်, birders ဖြင့်အမှန်တကယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစဉ်အမြဲစံပြမရှိကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ birders သာသူတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမျိုးစိတ်ထက်သူတို့လေ့လာတွေ့ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်မျိုးစိတ်ပေါ်အချက်အလက်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် upload ။
eBird သုတေသီများအဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းစီမံကိန်းများတွင်အထောက်အကူဖြစ်အံ့သောငှါ, ဤဒေတာကိုအရည်အသွေးကိုကိစ္စများ-ဖြေရှင်းချက်မှနှစ်ခုကိုအဓိကဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ ပထမဦးစွာ eBird သုတေသီများအဆက်မပြတ် birders ကတင်ပြသောအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, eBird သင်တန်းသားများပညာရေးကမ်းလှမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းအသုံးပြုပုံသူတို့ပဲအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ဘဲလေ့လာတွေ့ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်မျိုးစိတ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် upload လုပ်ဖို့ birders အားပေးကြောင်းချင်းစီပါဝင်သူရဲ့အချက်အလက်များ၏မြင်တွေ့စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးထားပါတယ် (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) ။ ဒုတိယအချက်မှာ eBird သုတေသီများကုန်ကြမ်းအချက်အလက်များ၏ဆူညံခြင်းနှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသဘောသဘာဝအဘို့ပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားကြောင်းစာရင်းအင်းမော်ဒယ်များကိုသုံးပါ (Fink et al. 2010; Hurlbert and Liang 2012) ။ ဤအစာရင်းအင်းမော်ဒယ်များအပြည့်အဝဒေတာကနေဘက်လိုက်မှုကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့် ornithologists အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့အဖြစ်ဤဒေတာ 100 နီးပါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သိပ္ပံနည်းကျစာပမြေားတှငျအသုံးပွုခဲ့ကြ, ထိုပြုပြင် eBird အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးအလုံအလောက်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။
သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ eBird အကြောင်းကိုကြားလျှင်အတော်များများက Non-ornithologists ပိုင်းတွင်အလွန်သံသယဖြစ်ကြသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်ဤသံသယ၏တစိတ်တပိုင်းမှားလမ်းအတွက် eBird စဉ်းစားရာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လူအတော်များများဟာပထမဦးဆုံး "ဟုအဆိုပါ eBird data တွေကိုပြီးပြည့်စုံသောရှိပါသလား" ထင်နှင့်အဖြေဖြစ်ပါတယ် "လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ " သို့သော်ကြောင်း, လက်ျာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ျာဆိုတဲ့မေးခွန်းကို "အခြို့သောသုတေသနမေးခွန်းများကိုများအတွက်လက်ရှိ ornithology ဒေတာထက်ပိုကောင်း eBird ဒေတာရှိပါသလဲ" ကြောင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုများအတွက်အဖြေကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြီးစားရာသီအလိုက်ရွှေ့ပြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအဖြစ်အကျိုးစီးပွား-ထိုကဲ့သို့သောများစွာသောမေးခွန်းများကိုအဘို့အစိတျအပိုငျးမှာ "ကျိန်းသေဟုတ်ကဲ့," ဖြစ်ပါတယ် ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းမရှိလက်တွေ့ကျကျအခြားနည်းလမ်း -there ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ eBird စီမံကိန်းအတွက်ကအရေးကြီးသောသိပ္ပံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းမှုအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဝင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသသည်။ သို့သော် eBird နှင့်ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ, နမူနာများနှင့်ဒေတာများအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုများဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းစီမံကိန်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ကြကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့လာမယ့်အပိုင်းထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပင်, သို့သော်, လိမ္မာပါးနပ်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာနှင့်အတူဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအချို့ setting တွင်လျော့ချနိုင်ပါတယ်။